Guyyaatti dhugaati Lallaafaa qaruura lama dhuguun carraa dafanii du’uu ni dabala – Fana Broadcasting Corporate
Guyyaatti dhugaati Lallaafaa qaruura lama dhuguun carraa dafanii du’uu ni dabala
Finfinnee, Hagayya 30,2011 (FBC) – Guyyaa guyyaatti dhugaati Lallaafaa qaruura lama dhuguun carraa dafanii du’uu akka dabalu qorannoon tokko ifoomse.
Qorannicha dhaabbanni Fayyaa Idila Addunyaa maanguddoota 450 biyyoota Awurooppaa 10 keessa jiraataan irratti qorannoo taasise bu’uura kan godhate ta’u zindipeendaanti balbaalloomseera.
Namoonni qorannoon kun irratti adeemsifame umuriin isaanii waggaa 50 ol yoo ta’aan, namoonni dhuukkuba akka kansarii, onnee, sukkaraa fi rakkinoota kana fakkataan qabaan qorannicha keessatti hin haammatamne.
Qorannichi bara Faranjoota 1992-2000 kan gaggeefame yoo ta’u, waggoota 16 namoota kana irratti yaaliin taasifamaa tureera.
Gabaasni qorannoo fayya barruu Jamaa yaalii Keessa jedhamu qabatee bahe, waggota 16 keessatti turtii ji’a tokkoo guyyaatti namoonni dhugaatti lallaafaa qaruuraa walakkaa dhugaan carraan du’aaf qabaan %9.3 yoo ta’u, guyyatti dhugaatii lallaafaa qaruuraa lamaa fi isa ol kan dhugaan ammoo carraan isaan du’aaf qabaan %11.5 akka ta’e ibseera.
Qorattoonni namoonni rakkinoota akka ulfaatina qaamaa, nyaata, sochii qaamaa, tamboo aarsuu fi barnoota waliin walqabate qaban ji’a keessatti guyyaatti dhugaati lallaafaa qaruura lama yoo itti dabalaan carraan isaan du’aaf qabaan %17 olguddatu qorannoo isaaniitiin agarsiissaniiru.
Cuukkoon meetira kuma 4 dheeratu qophaa’aa jira
Naannoo Somaalee Godina Afdooritti haati tokko daa’iman 4 deesse
Re’ee haadha harma 4 baayyota ajaa’ibsiifte
Barsiisaa gaarii idila addunyaa muuxannoo isaa Mootummoota Gamtoomaniif qooduufi